ကျွန်ကုလားတွေ မွတ်ဆလင်ဖြစ်လာတဲ့ သမိုင်းကို ပြန်ကြည့်ပါ။ သူတို့အဖိုးအဖွားတွေရဲ့ ဒေသကို အာရပ်တွေက စစ်တိုက်တယ်။ စစ်ရှုံးတဲ့အခါမှာတော့ အသက်အရွယ်ရောက်တဲ့ ယောကျားတွေအားလုံးကို သတ်ပြစ်တယ်။ ကုလားတွေရဲ့အဖိုးကို ခြေ၊ လက်တွေ ဖြတ်ပြီး ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ပြီးမှ သတ်တာနော်။ ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ အာရပ်တွေက မွတ်ဆလင်ဘာသာရဲ့ သင်ကြားချက်နဲ့အညီ . . . ကုလားတွေရဲ့အဖွား. . . ကုလားမတွေကို လူလယ်ခေါင်မှာ သူတို့ရဲ့ ဖင်မည်းမည်းကြီးတွေကို လှန်ခိုင်းတယ်။ စိတ်ထဲမှာ ဆာလီကြီးလှန်လို့ ပေါ်လာတဲ့ ဖင်မည်းမည်းကြီးကို မြင်ကြည့်စမ်းပါ။ ရွံစရာကြီးနော်? အဲဒါကို မရွံမရှာနဲ့ အာရပ်တွေက ဖင်မည်းမည်းကြီးတွေကို မုဒိမ်းဝိုင်းကျင့်တယ်။ အဖွဲ့လိုက် အားပါးတရနဲ့ ပျော်ပျော်ပါးပါး မုဒိမ်းကျင့်ခဲ့တာပါ။ စုတ်ပြတ်နေတဲ့ အာရပ်နဲ့ ညစ်ပတ်တဲ့ ကုလားမတွေ ရေစက်ဆုံခဲ့တဲ့ ချစ်ဇတ်လမ်းလေးပါ။ (ပါကစ္စတန်မှာ အာရပ်နဲ့ ကုလား ကပြားတွေအများကြီးရှိနေတာ အဲဒါကြောင့်ပါ။ )အဲဒီနောက်တော့ ကုလားတွေကို ဓါးပြပြီး မွတ်ဆလင် အတင်းကိုးကွယ် ခိုင်းပါတယ်။ စိတ်နာမယ် မထင်ပါနဲ့။ ကုလားက ချေးပေါ-သေးပေါ မွတ်ဆလင်ဖြစ်ရတာ ဂုဏ်ယူတယ်ဆိုပဲ။ ဂုဏ်မယူလို့ထွက်မယ်ဆိုရင်လည်း ထွက်ခွင့်မရှိပြန်ဘူး။ ထွက်ရင် သတ်ခံရမယ်တဲ့။ ကဲ. . .အထက်က ဗီဒီ.ယိုကိုကြည့်ပါ။ ပလီဆရာသူပြောနေတဲ့ စကားက ရှက်ရမှန်းမသိဘူးနော်? လူတစ်ယောက်ဟာ မယုံကြည်လို့ထွက်ရင် သတ်ပြစ်သင့်တယ်လို့ တီဗီမျက်နှာပြင်ပေါ်မှာ ပြောရဲတယ်နော်? ကဲဗျာ.. မွတ်ဆလင်က ဘာသာရေး တစ်ခုဆိုပဲ။ စအိုကိုမုဒိမ်းကျင့်ပြီး သာသနာပြုတယ်။ မယုံကြည်လို့ထွက်ရင်လည်း သတ်မယ်တဲ့. . . အဲဒါက ဘာသာရေးတဲ့လား? တစ်ခုခုတော့မှားနေပြီထင်တယ်နော်။
Posted by ★သခင်မျိုးဟေ့ဒို့မြန်မာ★ at 9:11 AM